ProofHQ: Nyocha na ntanetị na akpaaka arụmọrụ | Martech Zone
ProofHQ: Ngosipụta ọnlaịnụ na akpaaka arụmọrụ
Friday, April 17, 2015 Monday, May 4, 2015 Douglas Karr
GofKWUO bụ sọftụwia nyocha SaaS nke dabere na ntanetị nke na-eme ka nyocha na nnabata nke ọdịnaya na akụ okike wee mezuo ngwa ahịa na ngwa ngwa na obere mbọ. Ọ na-anọchi usoro email na usoro nnomi siri ike, na-enye ndị ọrụ nyocha nyocha iji nyochaa mmekọrịta na-emepụta ọdịnaya, na ndị na-ahụ maka ọrụ njikwa ọrụ iji soro nyocha na-aga n'ihu. Enwere ike iji ProofHQ gafee mgbasa ozi niile gụnyere mbipụta, dijitalụ na ọdịyo / visual.
Dịka, a na-enyocha ma mepụta ihe okike site na iji ozi ịntanetị, ihe nnomi-oyiri, nkesa ihuenyo na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-adịghị mma. GofKWUO na-edozi nsogbu a site na ịnye igwe ojii maka azịza maka ọrịre ọ bụghị naanị inyocha, dezie na imekota na ihe okike kamakwa ịnwe ndị mmadụ n'otu n'otu na ndị otu kwadoro ihe ọ bụla tupu ha abanye n'akụkụ ọzọ, nke bụ ihe pụrụ iche nke ProofHQ arụmọrụ akpaka eme.
Nhazi oru oru: Nyochaa nke ọma na akpaghị aka na nnwapụta arụmọrụ maka ihe okike gị dị oke mkpa iji hụ na a rụchara ọrụ ahịa na nnabata ndị ọzọ n'oge. Ma ị bụ ụlọ ọrụ nwere ọrụ dịgasị iche iche maka ndị ahịa ọ bụla ma ọ bụ akara na-ezute mkpọchi nke ụlọ na nnabata, ị ga-egbusi oge ọ bụla na nke ahụ dị mkpa na-enweghị otu. Site na arụmọrụ na-akpaghị aka, ndị nduzi okike, ndị njikwa ọrụ ma ọ bụ ndị na-ere ahịa na-achịkwa otu nwere ike itinye nyocha nyocha na ọrụ nnabata na autopilot, na-enye gị ohere ilekwasị anya na ịme ihe ị kachasị mma: ịbụ ndị na-arụpụta ihe ma na-emepụta ihe.
Key Akụkụ nke ProofHQ
Usoro nyocha na nnabata dị mfe
Real-oge, kensinammuo ịza ajụjụ na akara ngosi ngwaọrụ
Mepụta ihe ngosi site na ụdị faịlụ 150 +
Mmekọrịta na Njikwa oru na ngwaọrụ DAM dịka BaseCamp, Central Desktop, CtrlReviewHQ, Adobe Creative Suite, Microsoft Sharepoint, Xinet, Box, Widen na Workfront
Nyochaa ihe akaebe na PC, MAC, smartphone ma ọ bụ mbadamba
Auto-tunyere ọtụtụ nsụgharị
Kesara ihe akaebe na ndị otu nyocha a na-ekesa
Soro ihe akaebe megide oge igbu oge
Arụ ọrụ akpaghị aka
Nhazi ihe nlere
Oge akara akara nyocha
Tags: Adobe creativelọgị n'ụlọngangwá ọrụ gị n'ụlọngankwenyeBasecampBoxCentral na DesktọpụmmekotaCtrlReviewHQdesignMicrosoft Sharepointnyocha onlineàmàproofhqịgba akaebeotugbasaaXinet
Etu ị ga-esi wuo ma soro na Nkwalite ma ọ bụ Mgbasa Ozi nke Instagram gị
You're na-agaghị na-ekwu okwu Gigs N'ihi na Gị Online Ọnụnọ
Jun 24, 2013 na 7: 04 PM
ProofHQ bụ ezigbo mmalite, mana maka ndị ahịa ọkaibe karịa, biko lelee Viki Solutions. Na 2400% mbugharị miri emi, ụcha agba, nyochaa nyocha, nkwakọ ngwaahịa akọwapụtara, na teknụzụ maka ngwa ngwa, nchekwa faịlụ na ịkekọrịta ụwa, Viki Solutions na-egbo mkpa nke ndị isi ụlọ ọrụ njikwa njikwa gburugburu ụwa. Anyị ga-achọ ịbụ akụkụ nke otu isiokwu kwa! Amaara m na nke a bụ ụlọ ọrụ post, mana m na-anwa inyere ndị na-agụ akwụkwọ gị aka ịchọta ihe ha na-achọ.
Jul 6, 2013 na 5: 15 AM
Anyị na-eji Proofhub (www.proofhub.com) wee chọta ngwaọrụ nyocha yana mgbakwunye ndebiri ọrụ na ndebanye ọrụ ka mma karịa proofcq basecamp. The mmebe otu bụ n'ezie anabata na-ege ntị ndị ahịa ha, na bụ nnukwu gbakwunyere maka anyị.
Jan 23, 2014 na 8: 09 AM
ProofHQ bụ ezigbo nhọrọ mana ọ masịrị m ProofHub karịa n'ihi na ọ dị ike ma dịkwa mfe ma nwekwaa atụmatụ ndị ọzọ.